25 nooc oo far qoraal ah | Abuurista khadka tooska ah
Farta gacanta lagu qoro ayaa ah ilo aad ugu habboon tiro badan oo mashaariic muuqaal ah. Si kastaba ha noqotee, sidoo kale waxay leeyihiin cillado taasi waxay ka dhigeysaa iyaga kuwa aan lagula talin karin hadba xaaladaha iyo xaaladaha. Qaar badan oo naqshadeeyayaasha garaafka ah ayaa go'aansada inay iska indhatiraan inta badan sababo la xiriira cabsi gaar ah oo ay ka qabaan inay ku adkaato gudbinta farriimahooda. Iyagu ma ahan sabab la'aan, waana in noocyada noocyada noocyadan ah ay inta badan ku bixiyaan qaab muuqda, dhibaatooyin badan oo xagga sharciga ah. In kasta oo ay run tahay in dhammaantood aaney dhalin dhibaatadan, ama ugu yaraan aan isla heerkaas ahayn, had iyo jeer waa ku habboon tahay inaan isku dayno taxaddar yeelo markaad ku isticmaaleyso naqshadaheena. Haddii aad halkan joogto waa sababta oo ah waxaad xaqiiqdii tixgelinaysaa suurtagalnimada inaad ugu isticmaasho mashruuc. Halkan laga bilaabo waxaan kugu dhiiri gelinayaa inaad shaqada u degto, in kasta oo ay muhiim tahay inaad waxyaabaha qaar maskaxda ku hayso intaadan shaqada bilaabin.
Maanta waxaan soo bandhigeynaa xirmo aad u faa'iido badan oo ah farta gacanta lagu qoro iyo hage yar oo lagu hagaajinayo lagana faa'iideysanayo. Sababtoo ah dhab ahaan waa loo isticmaali karaa iyadoon la abuurin faragelin ku saabsan gudbinta macluumaadka waxayna ku siin karaan qiime dheeri ah naqshadaheena iyo fikradaheena. Aan ku bilowno bilowga!
1 Arrinta akhrinta
2 Italic lama mid aha gacanta lagu qoray
3 Xiriirka sumadaha shaqaalaha
4 Farta gacanta lagu qoro iyo abuuritaanka xoojinta
5 Farta gacanta lagu qoro oo ah walxaha qurxinta
6 Tilmaamaha muhiimka ah
Haddii noocyadan ilaha ah lagu sifeeyo wax, waa sababta oo ah iyagu waa xoogaa ka sii adag marka loo eego ilaha kale. Tani waxay keentaa dhibaatooyinka qaar maxaa yeelay waxay u baahan yihiin feejignaan dheeri ah iyo feejignaan si loo akhriyo waxyaabaha ku jira si habsami leh. Waraaqaha qaar waxay u muuqdaan kuwo lagu jahwareerayo kuwa kale dhibaatada noocan ah waxay ka dhigeysaa akhristaha inuu lumiyo xiisaha fariinta sidaa darteedna soo jiidashada naqshadaheena ay yaraato Kuwani waa sababaha ugu waaweyn ee noocyadan noocyada ah loo adeegsado si isdaba-joog ah oo aan badnayn oo ka mid ah bulshada naqshadeeyayaasha. Tani waa sababta ay si uun ugu laabteen diyaarad qurxin iyo qaab aad u yar oo ka kooban halabuurka. Si kastaba ha noqotee, waa inaan si cad uga hadalnaa doorka ay ku leedahay kiisaskan. Marka farta gacanta lagu qoro loo isticmaalo kaabis lagu qurxiyo, waxay kaloo taageereysaa farriinta iyo fikradda ku qarsoon naqshadaheenna, dhab ahaantii waxay leedahay ujeedo laba-geesood ah: Qurxinta iyo dhinaca kale isgaarsiinta. Waxaa muhiim ah haddii aad go'aansato inaad adeegsato noocyadan ilaha ah, inaadan waligaa iska iloobi doonin dhexdhexaad. Waa inaan baranaa sida loo isticmaalo qiyaasta isticmaalkeeda iyo markaan isticmaalno, waa inaan si cad u ogaano in xarfahayagu waa inay si fiican ula jaan qaadaan fariinta naqshadeynta ay rabto inay gudbiso. Waxaan tan u yeelaynaa oo keliya inaan ka fogaanno akhrinta qaarkood iyo dhibaatooyinka ku-habboonaanta, laakiin sidoo kale si farta gacanta lagu qoro ay u leedahay awood ama karti ay ku qabato akhristaha oo ay ku qabsato dareenkooda. Maskaxda ku hay in haddii aad isticmaasho noocyada noocyada noocyada ah inta aad ku jirto naqshadaada, farta gacanta lagu qoro ay luminayso dhammaan awoodda ay u leedahay dhexdhexaad ahaan. Mar alla markii ay ka muuqato mid kasta oo ka mid ah ereyada ka kooban halabuurka, ma lahaan doonaan xoog ama xiriirin akhristaha. Si uun, ma awoodi doonaan inay soo jiitaan ama ay qabtaan dareenka isticmaalaha.
Italic lama mid aha gacanta lagu qoray
Ku dhowaad sida quraafaad, fikradda farta gacanta lagu qoro had iyo jeer maskax ahaan waxay la xiriirtaa farta. Maaha wax lala yaabo inay taasi dhacday, waa inaan maanka ku haynaa inay jiraan tiro fara badan oo farta gacanta lagu qoro oo isla mar ahaantaana leh muuqaalka farta lagu fiiqay. Si kastaba ha noqotee, tani maahan muuqaal dabiici ah oo ku saabsan fikradda qoraal gacmeedka. Dhammaan farta gacanta lagu qoro malahan habaar, xitaa ma dhowa. Muuqaalka ugu muhiimsan ee noocan ah font, sida magaceedaba ka muuqata, waa inay umuuqato inay tahay gacanta lagu sameeyo. Dhammaan waraaqaha gacanta lagu sameeyay maahan wax habaara, sax? Waxaa la joogaa waqtigii aad baran laheyd kala duwanaanshaha labada fikradood. Xaqiiq ahaan, farta qoraalka gacmeedku waxay yeelan karaan muuqaalo iyo muuqaalo kala duwan oo aad u tiro badan, sidaa darteed waxaa jira waxyaabo badan oo beddelaadyo ah oo aan ahayn adeegsiga farta qoraalka. Waa inaad ku dadaashaa inaad doorato midka ugu habboon. Falanqee bangiga ballaaran ee ilaha iskuna day inaad aqoonsato kuwa la wadaagaya isbeddelka ganacsigaaga. Laakiin fadlan kaliya ha dooran noocyada farta ah ee muuqaalkooda ugu weyn uu yahay farta. Raadi oo baar fursadaha iyo noocyada badan ayaa ka sii fiican. Markaan u leexanno ilo-wareedyadan, waa sababta oo ah waxaan u baahanahay inaan ku dabbaqno wax yar "dadnimo" hadalkeenna muuqaalka ah. Waxaad ka heli kartaa qaybtan noocyo kala duwan oo kala duwan. Tusaale ahaan, font oo runtii muuqaal ahaan qasan ayaa laga yaabaa inay si aad ah ugu shaqeyso mashruucaaga. Hal-abuurkaagu wuxuu u baahan karaa qaddar fowdo ah iyada oo loo marayo ilaha la adeegsaday sidaas darteedna tani waxay kudeeqaysaa hadalka dhawaansho aad u weyn, dadnimo iyo daacadnimo. Qaar badan oo ka mid ah noocyada qoraalka ee lagu soo bandhigay buugga kutubta farta waxay ku kala duwan yihiin nooca qalabka soo jiiday: qalin, qalin, calaamadeeye ... Falanqaynta astaantan si loogu dabaqo mashaariicdaada sidoo kale waxay noqon kartaa mid xiiso leh. Inta badan ee aad aragto, ayaa sii weynaanaya heerkaaga aqoonta ee iyaga ku saabsan waxaadna heli doontaa kala duwanaansho weyn. Nuunisyada u muuqda kuwo aan la dareemin laakiin haddana waxay sameeyaan isbeddel muhiim ah.
Xiriirka sumadaha shaqaalaha
Noocyada gacanta lagu qoro ayaa si aad iyo aad u badanba loogu adeegsadaa bey'ada calaamadaha shaqsiyadeed ama summad shaqsiyeed Sababta waa mid aad u fudud, waana in warqadda noocan ahi ay bixiso dareen diirimaad, isu soo dhawaansho iyo isu soo dhawaansho. Waxay awoodaan inay soo jeediyaan waxa shakhsiyadda qofka ka dambeeya astaanta la sheegay ay tahay. Tani waa sababta ay muhiim u tahay inaad tixgeliso astaamaha aad rabto inaad ku xoojiso wejiga xulashada iyo tijaabada. Waa inaad awood u leedahay inaad aqoonsato astaamaha ugu muhiimsan ee astaantaada oo aad ka hesho font si aad u isticmaasho. Tani waxay u baahan tahay xoogaa dareen ah laakiin si aad ah ayey waxtar u leedahay. Waxaa jira qodob ay tahay inaad maskaxda ku hayso, waana taas waa inaad ka fogaataa adeegsiga farta gacanta lagu qoro sida ay tahay. Isticmaalka farta tooska looga qaato bangiga waa mid aan xirfad lahayn oo waliba otomaatig ah. Waa muhiim inaad barato inaad wax yar oo shakhsiyaddaada ah iyo hal-abuurnimadaada ku dhex rido. Wax ka beddel, ku samee astaamahaaga adoo ku saleynaya nooca ay ku shaqeyneyso. Waa inaad waxyar iska ilaalisaa, maxaa yeelay haddii aad si aan dheellitirnayn u sameyso waxaad halis ugu jirtaa inaad dib ugu laabato la'aanta akhrinta. Haddii aad haysato fursad aad ku shaqaaleyso qoraa wax qora, font caadadiisu aad ayey u fiicnaan doontaa, in kastoo qof kastaa uusan suurtagal ahayn. Gaar ahaan marka aan la kulanno heerarka ugu horreeya ee horumarka ganacsi ama summad. Hadaad jeceshahay aduunka ee suugaanta qoraalka waxaad naqshadeyn kartaa font-kaaga adiga oo ku saleynaya baahiyaha magacaaga. Markii hore waa inaad sameysaa naqshad fikradeed oo xoog badan dabcanna falanqeyso xarfo badan oo adiga kugu soo jiidasho leh. Waxa kale oo aad isticmaali kartaa naqshadeyntaada. Kaliya waxaad u baahan tahay qalin iyo warqad, qor erayga aad rabto inaad ku metesho meheraddaada oo iskaan. Waxaad markaa awoodi doontaa inaad ku bilowdo inaad si dijitaal ah ugu shaqeyso sawir gacmeedkan iyo barnaamij naqshad sameeyn gaar ah leh.
Farta gacanta lagu qoro iyo abuuritaanka xoojinta
Waxaa jira istiraatiijiyado iyo farsamooyin fara badan oo kala duwan oo awood u leh inay ku soo bandhigaan firfircooni qaab lahjad ama xoojinta halabuurka ah. Xeeladahaas waxaa ka mid ah midab. Sida dhidibka waxaan u isticmaali midabada shirkad oo waxaan ku sameynaa isbeddelo ku dhaca codadka meelaha qaarkood si markaa sidan oo kale asynchrony u dhacdo fariintuna u hesho xoog iyo firfircoonaan. Mid kale oo ka mid ah istiraatiijiyaddan ayaa ku saleysan cabir. Waxay ku filnaan doontaa in wax laga beddelo cabbirka curiye ka mid ah halabuurka, sidan ayaan u jabin doonnaa laxanka. Saas ma aha, waxaan ka abuuri doonnaa laxanka nasashada iyada oo la is waafajinayo taas oo si kadis ah uga dhigaysa guud ahaan kuwo is waafajiya. Sida aad u aragto, mabda'a aasaasiga ah ee dhammaan dhaqdhaqaaqyadani waa isku mid: Qabso fiiro gaar ah oo si uun u dejiso kala-sarreyn fikradeed iyo muuqaal oo ka caawisa akhristaha inuu diiradda saaro xoogaa cunsurro ah. Istaraatiijiyaddan bar-tilmaameedka ah ayaa aad nooga fududaan doonta «xamili»Macluumaadka, ku ciyaar kuna dhis hadal ka awood iyo qancin badan. Ujeeddada ugu weyn ee hadal kasta oo muuqaal ahi waa in lagu sii dhex jiro xusuusta daawadayaasha. Sidan oo kale waxaan hubin doonnaa inaan la abuuro xiriir isaga iyo sidaas darteed isweydaarsiga sumadeena. Qaab-qoristu waa mid aan ka reebanayn sidaa darteedna kama baxsanayo istiraatiijiyaddan. Waxaan u adeegsan karnaa noocyada noocyada kala duwan si aan u siino saameyn muuqaal ah daawadayaasha, ama mararka qaarkood si fudud ayaa ugu filan inaan u isticmaalno isla nooc isku mid ah qaabab kala duwan (geesinimo, xarago ...). In kasta oo nashqadeeyayaal badani ay go’aansadeen inay ka fogaadaan farsamadan haddana aad ayaa loogu talinayaa. In kasta oo ay run tahay inay lama huraan tahay in la yeesho dhadhan iyo xasaasiyad gaar ah oo la isugu geeyo laba ilo oo kala duwan. Sikastaba, laguma talin karo inaad ku takri-falto farsamadan sidoo kale laga soo qaaday farta qoraalka. Waxaa lagugula talinayaa in ugu badnaan seddex nooc oo kala duwan loo isticmaalo hal naqshad. Waxaa laga yaabaa inaad u baahato xoogaa tababar ah si aad ubilowdo istiraatiijiyaddan. Halkan waxaan kugu casuumayaa inaad tijaabiso oo aad dhaqan geliso.
Farta gacanta lagu qoro oo ah walxaha qurxinta
Mid ka mid ah astaamaha cajiibka ah ee noocan ah xarfaha ayaa ah qallooca xariiqyada, isu dheelitir la'aanta mugga iyo dabcan joogitaanka joogtada ah ee qaababka wareegsan iyo xarrago leh. Sababahan awgood, farta gacmeedku waxay ku qumman tahay in la naqshadeeyo oo laga horumariyo, shey qurxin leh oo dhameystiraya astaan ​​ama halabuur. In kasta oo aysan aad u badnayn, haddana waxay noqon kartaa istiraatiijiyad siinaysa macaan, macaan iyo xarrago halabuur.
Ha u adeegsan qoraallada ballaaran: Waraaqaha gacmeedku way fududahay in lagu jahwareeriyo oo la isku daro, sidaa darteed waxaa lagama maarmaan ah in aan iska ilaalino marka hore adoo u adeegsanaya qoraallo fara badan. Waa inaan isku daynaa inaan u yareyno isticmaalkeeda kiisaska gaarka ah ama meelaha qoraalka laga yareeyay. Haddii kale waxay lumin doonaan saameynta waxayna u badan tahay inay noqdaan qoraal aan ku martiqaadeynin in la akhriyo. Waxaa aad loogula talinayaa inaan u qoondeeyno noocyada xarfaha noocyada jumlado yarayn, mararka qaarkood muujinta erayga muhiimka ah (mararka qaarkood xitaa xarafka) way ka badan tahay wax ku filan oo saamaynteeda ayaa aad u soo jiidasho leh, la akhrin karo oo waxtar leh.
Asalka iyo qoraalka farqiga: Waa inaan baranaa sida loo daryeelo waxyaabaha ka soo horjeedka ah. Gaar ahaan in lagu ciyaaro codadka xarfaha iyo asalka. Waxa ugu fiican ayaa ah in meelaha ama khaanadaha qoraalka dhexdooda ay ka jiraan labis ama ugu yaraan midab badhkood hufan. Haddii asalka uu ka kooban yahay sawir, waxaa lagugula talinayaa inaan isku dayno inaan ku daboolno nooc ka mid ah cilladaha si loo hagaajiyo sharcinimada. Maskaxda ku hay in sawirku yahay mid aan kala sooc lahayn oo hadhkiisana si shil ah loogu qaybiyo aagag aad u kala duwan oo ka yar oo waliba ku dhaca iftiinka Sidaa darteed, waa inaad isku daydaa inaad si wanaagsan u doorato waxa saxda ah, iftiinka, iyo asalka sidoo kale.
Cabbir: Waa inaad isku daydaa inaad siiso fartaada gacanta lagu qoro cabirro u dhexeeya cabbirka dhexdhexaadka iyo midka weyn. Tani waxay sahlaysaa akhriska qofka daawada oo aad bay u kala duwanaan doontaa muuqaal ahaan iyo waqti gaaban.
Xisaabi, ma u qalantaa? : Oo ay ku jiraan farta gacanta lagu qoro waxay leedahay taxane saameyn ah waxayna keenaysaa xaalado taxane ah oo ku saabsan amarka iyo isku dubaridka booska iyo sidoo kale adeegsiga midabada. Waxaa jira waqtiyo badan markaan dhammeyno halabuur u muuqda kuwo aad u wanaagsan, waxaan go'aansanay inay noqon karto fikrad wanaagsan in lagu daro font gacanta lagu qoray. Dhibaatadu waxay tahay iyada oo lagu daro font-ka xiisaha inoo leh, waxaan bilaabaynaa inaan aragno inaysan u fiicnayn ama loo akhrin karin sidii aan fileynay. Kadibna waxaan bilaabaynaa inaan adeegsanno istaraatiijiyaddii aan ku sheegnay qodobbadii hore laakiin waxaan ogaanay inay tahay inaan dib u qaabeyno halabuurka oo dhan. Xaaladahaas, ma faa'iido baa? Iskusoo wada duuboo, waa inuu xiriir la leeyahay naqshadeynta fikradeed ee aan soo saarnay. Xaaladahaas gabi ahaanba waa wax aan khuseyn in aan "jecelnahay" bilicdeeda. Haddii ay naga kaxeyso macnaha naqshadeynta, waa inaan iska tuurnaa fikradda.
Isku dheelitirka midabka, iskudhafka: Haddii aan ku beddelano xarfaha gacanta lagu qoro noocyo kale oo xarfo ah, waa inaan sidoo kale baranno ku ciyaaridda heerka midabka. Waxaan hoosta ka xarriiqi karnaa is-beddelkan ku saabsan beddelka noocyada farqiga u dhexeeya, iyo sidoo kale isbarbar dhiga heerka cabbirka ama qaabka. Haddii aan ku ciyaari karno midabada shirkadaha shirkadeena ama aan ku beddeli karno si aan u shaqeyno tusaale ahaan boodhadh xayaysiis ama saameyn ku yeelan kara halheyska, natiijada ayaa noqon doonta tan ugu wax ku oolka badan.
Haddii aad shaki ka qabto natiijada aad raadineyso, waxaa lagugula talinayaa inaad isku daydo inaad horumariso khadadka hal-abuurka ee kala duwan iyo hababka hal-abuurka leh waxyaabo kala duwan. Waxaad ka heli kartaa qaaciidooyin kala duwan oo soo jiidan kara adiga ama macmiilkaaga haddii aad u shaqeyneyso dhinac saddexaad. Xaaladahaas oo kale wax ka wanaagsan ma jiro in loo adeegsado falanqeyn yar oo qoto dheer. Gaar ahaan haddii aan ka shaqeyneyno astaan ​​ama qeyb ka mid ah aqoonsiga shirkadaha ganacsiga. Dalxiis garaafiska xayaysiinta waxay noqon kartaa hab wanaagsan oo lagu helo jawaabaha aan raadineyno. Waxaan sidoo kale ku dabaqi karnaa mid kasta oo ka mid ah naqshadeynta taageerooyinka mustaqbalka ee ay qabsan doonaan oo aan sidan ku go'aansan karno iyadoo ku saleysan shaqadiisa iyo aragtida mid ka mid ah xalka ugu habboon ee ujeeddooyinka la dejiyay. Astaamaha isku dhafan ayaa dhib badan leh marka ay timaado ku-tallaalidda dusha sare ama cabbirrada. Waxaad u baahan doontaa inaad hubiso inay tahay wax la qori karo oo si fudud loo garan karo.
Gunaanad ahaan waa inaad maanka ku haysaa in far-qoraal gacmeed lagu soo bandhigi karo noocyo kala duwan iyo noocyo si loogula jaanqaadi karo mashaariic noocyo kala duwan leh. Qoraalka far gacmeedka ah ayaa si isa soo taraysa loogu adeegsadaa mashaariicda naqshadeynta garaafka, qaabeynta tifaftirka, qaabeynta webka iyo mashaariicda maqalka. Markaad go'aan ka gareyso xalalkan, waa inaad maanka ku haysaa inay jiri doonaan shuruudo ama qodobo qaar oo xisaabta lagu darsado si ay si buuxda ula qabsan karaan halabuurkaaga. Marka xigta waxaan idinla wadaagi doonnaa wax yar xulashada noocyada Kuwa ugu soo jiidashada badan uguna fiican waa in lagu heli karo bilaash.
Waxaa lagugula talinayaa inaad haysato bangiyada ilaha qaarkood oo aad si joogto ah u heli karto. Tusaalooyinka wanaagsan ayaa ah Font squirrel, Google Fonts ama wax lamid ah. Guud ahaan, bangiyada noocan ah, waxaad si fudud uheli kartaa noocyadan ilaha ah maxaa yeelay waxaa loo kala saaray menusyada ugu waaweyn.
Boqorka iyo Boqorada
Hal Dhicis Ah
Qoraal duug ah
Qoraalka Adine Kirnberg
Ma u isticmaashay nooc kasta oo far gacmeed ah oo ku jira mashaariicdaada muuqaalka iyo aqoonsiga shirkadaha? Ii sheeg qaybta faallooyinka oo nala wadaag shaqadaada haddii aad rabto!
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » Fuentes » 25 nooc oo far qoraal ah
Aad ayaan u fiicanahay mar hore ayaan ku daalay raadinta noocyadan ilo, aad baad u mahadsantahay.
heer sare, waxaan sameynayaa casuumaado aroos qaarna waa wax weyn, aad baad u mahadsantahay
Ku jawaab Rodarte
waad ku mahadsan tahay xulashada laakiin, marka la eego tayada, in yar ayaa ka hartay ... Waxaan kuu sheegayaa inaad tahay naqshadeeye iyo jeclahay qaab qoraalka.
Ku jawaab vanhalex
Aad u fiican !!. Mahadsanid.
Ka jawaab xukunka